နေ့တိုင်းနီးပါးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုအရာတွေကို မွေးမြူရမလဲ? - For her Myanmar
ဖတ်သင့်ပါတယ်၊ ၃ လစာတွေသွင်းပြီး ဒီအတိုင်း ပလစ်လိုက်ရတဲ့ အကွက်တွေ ထပ်မဖြစ်ချင်ရင်ပေါ့…
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအနုပညာဆိုတာ လွယ်မေယာင်နဲ့ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ အရာတစ်ခုပဲလို့ပြောရင် ယောင်းတို့ နှင်းကို ငြင်းကြမလားမသိ? ဆော့ဖို့က အတော်ခက်ခဲတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးရယ် ယောင်းတို့ရဲ့.. ဒါဖြင့် ဘယ်ဟာက ခက်ခဲတာလဲဆိုရင် အချိန်ကြာကြာ စွဲပြီး ဆော့ဖို့က ခက်ခဲတာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း ဆိုတာမျိုးကလည်း တစ်ရက်လောက် အတင်းလုပ်လိုက်ရုံနဲ့ သိသာတဲ့ အမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးလေ.. ရေရှည်လေ့ကျင့်သွားရမှာမျိုးဆိုတော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့မပျင်းအောင်၊ အကျင့်ဖြစ်သွားအောင် ဘယ်လိုကျင့်ယူရမလဲဆိုတာကို နှင်းကဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဝေမျှပေးပါ့မယ်နော်။
(၁) လေ့ကျင့်ခန်းဆော့ဖို့ အချိန်ဇယား တိတိကျကျထားပါ။
အဲဒါက နှင်းကိုယ်တိုင် လေ့လာထားတာပေါ့နော်။ အရင်အလုပ်မလုပ်ခင်တုန်းက အချိန်တိုင်းကအားနေတော့ သွားချင်တဲ့အချိန် ကောက်ဆင်း၊ မဆင်းချင်တဲ့ရက်ကျရင် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအကြောင်းပြပြီး အပျင်းတစ်နေတော့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တိတိကျကျရှိတဲ့ Zumba တို့၊ Aerobic တို့ကိုကျတော့ အိပ်ပျော်နေရင်တောင် ကောက်ထပြီးသွားတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းအလုပ်လေးစလုပ်လာတဲ့အခါ အလုပ်ကနေ ပြန်လာပြီး ဘယ်အချိန်ဆို ရောက်အောင် သွားမယ်လို့ တိတိကျကျအချိန်ဇယားဆွဲလိုက်တော့ မသွားဖြစ်ရင် တစ်ခုခုလိုပြီး ထိုင်မရထမရဖြစ်နေရော။ အချိန်ဇယားဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး သတိပေးထားသလိုဖြစ်နေတော့ မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ပျက်ကွက်သလို ခံစားမိတာမျိုးလေ… ဒါလေးကတော့ Mind Twist (စိတ်ကိုလှည့်စားခြင်း) တစ်မျိုးပေါ့..
Related Article >>> Gym သွားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေလား? ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပါ။
(၂) Gym သွားရင်ယူသွားမယ့်ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာထားပါ။
ဒါကလည်း စိတ်ကိုလှည့်စားခြင်း နောက်တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီလိုပစ္စည်းတွေကို မျက်စိရှေ့ထားထားတော့ မြင်လိုက်တိုင်း ငါသွားရဦးမယ်ဆိုတဲ့ မသိစိတ်က ယောင်းတို့ကို သတိပေးနေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ အားကစားဖိနပ်ကို အိမ်ရှေ့မှာ တင်ထားတာမျိုး၊ Gym သွားတိုင်း ယူသွားတဲ့အိတ်ကို အိမ်ရှေ့ထိုင်ခုံမှာ ထားထားတာမျိုးအပြင် မသွားခင် ၁ နာရီလောက်အလိုမှာ အင်္ကျီလဲထားတာမျိုး၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်နော်။ ဒါကလည်း Gym ကို ပုံမှန်ရောက်ဖို့ တွန်းအားတစ်ခုပါပဲ။
(၃) Gym မှာသူငယ်ချင်းဖွဲ့ပါ။ လူတိုင်းနဲ့ စကားစမြည်ပြောပါ။
အရင်ဆုံးမှာရမှာက ချေမိုးမနေဖို့ပါ။ ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲ ပိုက်ဆံပေးဆော့ဆော့ နည်းနည်းပါးပါး နိုးနိုးကြားကြားလေးနဲ့ လူတွေကို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံပါနော်။ ဒီလို ဆက်ဆံလိုက်တာက ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်လည်း ကောင်းသလို သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ တိုးလာတော့ ကိုယ့်ကို Gym လာအောင်ဆွဲဆောင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်မျိုးပဲပေါ့။ Gym မှာတွေ့ပြီး အပြင်မုန့်ဆိုင်မှာပဲ ပတ်ချိန်းနေတတ်တဲ့ ဝါသနာတူမဖြစ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။
(၄) သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း အချိန်ကို ၁၀ မိနစ် သတ်မှတ်ထားပါ။
Gym ဆော့တဲ့နေရာမှာ Cardio (နှလုံးခုန်နှုန်းကိုမြန်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း) နဲ့ ရိုးရိုးအလေးမလေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Cardio သမားကတော့ အရမ်းမောတာကလွဲပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ ပျင်းတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပေမဲ့ ရိုးရိုးအလေးမသမားကတော့ ကြာရင် ပျင်းလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နေ့စဉ်ပုံမှန် Routine ထဲမှာ အလေးမမခင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းကို ၁၀ မိနစ်လောက် အချိန်ခွာပေးထားပါ။ ဒီလိုဆော့လိုက်ခြင်းက သွေးနည်းနည်းပူသွားစေတာမို့ အရမ်းပျင်းနေတာမျိုး မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ဒီလိုအချက်လေးတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးရင် အရင်တုန်းကလို Gym သွားဖို့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲကြီး ရုန်းကန်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ အဓိကလိုအပ်တာက ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို မဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကို ရအောင်သွင်းထားဖို့ပါပဲ။ နောက်မှအရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့ဆိုတာမျိုးတွေက တစ်မျိုးပေါ့။ (ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျတာဆိုတော့လေ။) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်တော့ တစ်နေ့မှာ နှစ်နာရီလောက်အချိန်ပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုတော့ အမြဲထည့်ထားပါလို့…
ဖတျသငျ့ပါတယျ၊ ၃ လစာတှသှေငျးပွီး ဒီအတိုငျး ပလဈလိုကျရတဲ့ အကှကျတှေ ထပျမဖွဈခငျြရငျပေါ့…
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးအနုပညာဆိုတာ လှယျမယောငျနဲ့ အငျမတနျခကျခဲတဲ့ အရာတဈခုပဲလို့ပွောရငျ ယောငျးတို့ နှငျးကို ငွငျးကွမလားမသိ? ဆော့ဖို့က အတျောခကျခဲတာလားဆိုတော့ မဟုတျဘူးရယျ ယောငျးတို့ရဲ့.. ဒါဖွငျ့ ဘယျဟာက ခကျခဲတာလဲဆိုရငျ အခြိနျကွာကွာ စှဲပွီး ဆော့ဖို့က ခကျခဲတာပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျး ဆိုတာမြိုးကလညျး တဈရကျလောကျ အတငျးလုပျလိုကျရုံနဲ့ သိသာတဲ့ အမြိုးလညျး မဟုတျဘူးလေ.. ရရှေညျလကေ့ငျြ့သှားရမှာမြိုးဆိုတော့ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျဖို့မပငျြးအောငျ၊ အကငျြ့ဖွဈသှားအောငျ ဘယျလိုကငျြ့ယူရမလဲဆိုတာကို နှငျးကဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာ ဝမြှေပေးပါ့မယျနျော။
(၁) လကေ့ငျြ့ခနျးဆော့ဖို့ အခြိနျဇယား တိတိကကြထြားပါ။
အဲဒါက နှငျးကိုယျတိုငျ လလေ့ာထားတာပေါ့နျော။ အရငျအလုပျမလုပျခငျတုနျးက အခြိနျတိုငျးကအားနတေော့ သှားခငျြတဲ့အခြိနျ ကောကျဆငျး၊ မဆငျးခငျြတဲ့ရကျကရြငျ တဈခုမဟုတျတဈခုအကွောငျးပွပွီး အပငျြးတဈနတေော့တာပဲ။ ဒါပမေဲ့ အခြိနျတိတိကကြရြှိတဲ့ Zumba တို့၊ Aerobic တို့ကိုကတြော့ အိပျပြျောနရေငျတောငျ ကောကျထပွီးသှားတယျလေ။ ဒါပမေဲ့ နောကျပိုငျးအလုပျလေးစလုပျလာတဲ့အခါ အလုပျကနေ ပွနျလာပွီး ဘယျအခြိနျဆို ရောကျအောငျ သှားမယျလို့ တိတိကကြအြခြိနျဇယားဆှဲလိုကျတော့ မသှားဖွဈရငျ တဈခုခုလိုပွီး ထိုငျမရထမရဖွဈနရေော။ အခြိနျဇယားဆှဲလိုကျတယျဆိုတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လုပျကိုလုပျရမယျဆိုပွီး သတိပေးထားသလိုဖွဈနတေော့ မလုပျဖွဈတဲ့အခါ ပကျြကှကျသလို ခံစားမိတာမြိုးလေ… ဒါလေးကတော့ Mind Twist (စိတျကိုလှညျ့စားခွငျး) တဈမြိုးပေါ့..
Related Article >>> Gym သှားဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုမရှိဖွဈနလေား? ဒီဆောငျးပါးလေးကိုဖတျပါ။
(၂) Gym သှားရငျယူသှားမယျ့ပစ်စညျးတှကေို ကိုယျ့မကျြစိရှမှေ့ာထားပါ။
ဒါကလညျး စိတျကိုလှညျ့စားခွငျး နောကျတဈမြိုးပါပဲ။ ဒီလိုပစ်စညျးတှကေို မကျြစိရှထေ့ားထားတော့ မွငျလိုကျတိုငျး ငါသှားရဦးမယျဆိုတဲ့ မသိစိတျက ယောငျးတို့ကို သတိပေးနပေါလိမျ့မယျ။ ဥပမာ အားကစားဖိနပျကို အိမျရှမှေ့ာ တငျထားတာမြိုး၊ Gym သှားတိုငျး ယူသှားတဲ့အိတျကို အိမျရှထေို့ငျခုံမှာ ထားထားတာမြိုးအပွငျ မသှားခငျ ၁ နာရီလောကျအလိုမှာ အင်ျကြီလဲထားတာမြိုး၊ ကွိုတငျပွငျဆငျထားတာမြိုး လုပျပေးသငျ့ပါတယျနျော။ ဒါကလညျး Gym ကို ပုံမှနျရောကျဖို့ တှနျးအားတဈခုပါပဲ။
(၃) Gym မှာသူငယျခငျြးဖှဲ့ပါ။ လူတိုငျးနဲ့ စကားစမွညျပွောပါ။
အရငျဆုံးမှာရမှာက ခမြေိုးမနဖေို့ပါ။ ကိုယျကဘယျလောကျပဲ ပိုကျဆံပေးဆော့ဆော့ နညျးနညျးပါးပါး နိုးနိုးကွားကွားလေးနဲ့ လူတှကေို ဖျောဖျောရှရှေေ ဆကျဆံပါနျော။ ဒီလို ဆကျဆံလိုကျတာက ကိုယျ့ရဲ့ လူမှုပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးအတှကျလညျး ကောငျးသလို သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေေ တိုးလာတော့ ကိုယျ့ကို Gym လာအောငျဆှဲဆောငျတဲ့ နညျးလမျးတှထေဲက တဈမြိုးပဲပေါ့။ Gym မှာတှပွေီ့း အပွငျမုနျ့ဆိုငျမှာပဲ ပတျခြိနျးနတေတျတဲ့ ဝါသနာတူမဖွဈဖို့တော့ လိုတာပေါ့နျော။
(၄) သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျး အခြိနျကို ၁၀ မိနဈ သတျမှတျထားပါ။
Gym ဆော့တဲ့နရောမှာ Cardio (နှလုံးခုနျနှုနျးကိုမွနျစတေဲ့လကေ့ငျြ့ခနျး) နဲ့ ရိုးရိုးအလေးမလကေ့ငျြ့ခနျးဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ Cardio သမားကတော့ အရမျးမောတာကလှဲပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရတာ ပငျြးတယျဆိုတာမြိုးမရှိပမေဲ့ ရိုးရိုးအလေးမသမားကတော့ ကွာရငျ ပငျြးလာတတျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ နစေ့ဉျပုံမှနျ Routine ထဲမှာ အလေးမမခငျ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးကို ၁၀ မိနဈလောကျ အခြိနျခှာပေးထားပါ။ ဒီလိုဆော့လိုကျခွငျးက သှေးနညျးနညျးပူသှားစတောမို့ အရမျးပငျြးနတောမြိုး မဖွဈတော့ဘူးပေါ့။
ဒီလိုအခကျြလေးတှကေိုလိုကျလုပျပေးရငျ အရငျတုနျးကလို Gym သှားဖို့အတှကျ ခကျခကျခဲခဲကွီး ရုနျးကနျနစေရာမလိုတော့ပါဘူးနျော။ အဓိကလိုအပျတာက ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာမဆို မဖွဈဖွဈအောငျသှားမယျဆိုတဲ့စိတျကို ရအောငျသှငျးထားဖို့ပါပဲ။ နောကျမှအရေးကွီးကိစ်စပျေါလာလို့ဆိုတာမြိုးတှကေ တဈမြိုးပေါ့။ (ဒူးလောကျတငျမှ ရငျလောကျကတြာဆိုတော့လေ။) ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကောငျးဖို့အတှကျတော့ တဈနမှေ့ာ နှဈနာရီလောကျအခြိနျပေးသငျ့တယျ ဆိုတဲ့အတှေးလေးကိုတော့ အမွဲထညျ့ထားပါလို့…
Tags: Fitness, Health, lifestyle, long term, Plan
Hnin Ei Oo April 29, 2019